UPDATE: Guddoomiyihii guddiga badbaadada Jubbaland oo dhaawac halis ah loogu geystay Kismaayo | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Guddoomiyihii guddiga badbaadada Jubbaland oo dhaawac halis ah loogu geystay Kismaayo
UPDATE: Guddoomiyihii guddiga badbaadada Jubbaland oo dhaawac halis ah loogu geystay Kismaayo
Kismaayo (Halqaran.com) – Waxaa xalay magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ah ee dowlad goboleedka Jubbaland, lagu toogtay Abuukaate Axmed Jaamac Qalyar oo ahaa guddoomiyaha guddigii la magacbaxay badbaadada Jubbaland, kaasoo soo gaaray dhaawac halis ah.
Goobjoogayaal ayaa wariyaha Halqaran.com, ee magaalada Kismaayo u xaqiijiyay, in rag bistoolado ku hubeysan ay weerar ku qaadaan Abuukaate Axmed Qalyar, xilli uu ku sii jeeday masaajidka.
Abuukaate Axmed Qalyar oo sidoo kale ah nabaddoon si weyn looga yaqaano Jubbaland oo dhaawac culus soo gaaray ayaa loola cararay isbitaal ku yaalla magaalada Kismaayo, halkaasi oo lagu dabiibayo.
Muddooyinkii dambe, nabaddoon Axmed Jaamac Qalyar ayaa ka mid ahaa golaha isbaddel doonka Jubbaland oo si weyn uga soo horjeeda maamulka Axmed Madoobe, isagoona dhawaan hadalo adag ku weeraray madaxweynaha Jubbaland.
Ilaa iyo hadda lama oga sababta ka dambeysa weerarka toogashada ah ee loogu geystay nabaddoonka gudaha magaalada Kismaayo.
Abuukaate Axmed Jaamac Qalyar
Guddoomiyihii guddiga badbaadada Jubbaland
weerar toogasho kismaayo